Biomassa sy vovo mineraly no nameno ny tsipika fitambaran'ny plastika PLA PBAT - China Biomassa sy vovo mineraly nameno Bio-plastika PLA PBAT mpamatsy tsipika, Factory –Jwell
Biomassa sy vovoka mineraly dia nameno ny tsipika fitambarana Bio-plastika PLA PBAT
Ny plastika dia novolavolaina betsaka tamin'ny sehatra maro noho ny tombony entin'ny lanjany maivana, ny tanjaka avo, ny fananana simika miorina ary ny vidiny mirary. Ny indostrian'ny plastika dia mivoatra haingana be, ary tsy misy fomba mety hanary ireo plastika efa niasa, izay miteraka fahasarotana ny fandotoana ny tontolo voajanahary dia tsy azo ihodivirana! ny fako maloto toy ny plastika dia handoto ny tontolo iainana, halevina lalina no hanafika ny tany, handoro ny rivotra, tsy ireo no vahaolana ifotoran'ny olana. Vahaolana lehibe ho an'ny olana ny famolavolana plastika simba fa tsy ny plastika tsy simba. Ny plastika simba dia novolavolaina mba hiarovana ny tontolo iainana. Misy dikany betsaka izany. Ny fahombiazan'ny plastika mora simba dia miharihary ary manana vinavinan'ny fampandrosoana malalaka.
Bio-plastika + 35%
Biomassa sy mineraly
Rafitra fanodinana ：Ny akora biolojika-plastika, vovoka biomassa ary vovo-mineraly dia alefa ao anaty extruder visy kambana amin'ny alàlan'ny mpamatsy LIW marina misaraka miaraka amin'ny automation avo lenta
ary malefaka manitsy ny famolavolana.
Rafitra fitambarana ：Extruder kambana maotera modular miaraka amina boaty fanamafisam-peo avo lenta, mitazona barila tsy azo ovaina sy manohitra ny lozisialy, fantsom-batana avo sy fiarovana azo antoka, fanafanana mahomby ary fanaraha-maso tsara mba hiantohana ny famokarana maharitra, azo antoka ary maharitra.
Rafitra fanapahana anaty rano ：Ny rafitra fanapahana anaty rano mialoha dia afaka mamokatra pellet eliptika miaraka amin'ny automatisation avo lenta, ny rafitra mihidy dia tsy misy setroka setroka sy vovoka amin'ny tontolo iainana ary afaka mifanaraka amin'ny takian'ny fahaiza-manao isan-karazany.
Fampitaovana fanampiana fanampiny:Fitaovana any ambanivohitra manankarena sy mitombina no mahatsapa ny homogenisation, sieving, fanamainana ary fanamainana mandra-pahatongan'ny automat? Ic fonosana tsara.